တူညီသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသည် - လိင် @ ဦး နှောက်လေ့လာမှု (၂၀၁၁၉) တွင်လိင်စိတ်မမှန်ရောဂါရှိသည့်အမျိုးသားများ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာ - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
J ကို Clin Med ။ 2019 ဇန်နဝါရီ 30; 8 (2) ။ pii: E157 ။ Doi: 10.3390 / jcm8020157 ။
အိန်ဂျယ် J ကို1, Veit M က2, နစ်မြုပ်ကို C3, Heitland ငါ4, Kneer J ကို5, Hillemacher T က6,7, Hartmann ဦး8, Kruger THC9.
hypersexual အပြုအမူမှပေါ်ပေါက်ပြဿနာများမကြာခဏလက်တွေ့ setting တွင်မြင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ hypersexual ရောဂါ (HD ကို) နဲ့တဦးချင်းစီ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်။ HD ကိုများအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံမပြည့်စုံသောလူတစု (HD ကိုအတူယောက်ျား, n = 50) (ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှု၏အုပ်စုတစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်n = 40) ။ ကျနော်တို့ Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းနှင့်လက်တွေ့အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီး, sociodemographic neurodevelopmental နှင့်မိသားစုအချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ HD ကိုအတူယောက်ျားကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလေးသည်ကြမ်းတမ်းပုံရိပ်တွေ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, paraphilias စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ၏မြင့်မားသောနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပွငျကိုထိခိုက်မမှန်, ပူးတွဲမှုအခက်အခဲများ, Impulse နှင့်အလုပ်မဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ၏နှုန်းထားများ HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ HD ကိုအတူယောက်ျားဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံပုံစံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ကြပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ် sociodemographic, neurodevelopmental အချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်မိသားစုအချက်များရှိကြ၏။ Regression ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ပူးတွဲဖိုင်ကို-related ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် HD နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူတို့၏စပ်ကြားမတူညီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းညွှန်ပြ။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ HD ကိုအတူယောက်ျားကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတူတူ neurodevelopment ထောက်လှမ်းရေးအဆင့်ဆင့်, sociodemographic နောက်ခံနှင့်မိသားစုအချက်များရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသော်လည်း, သူတို့သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများသတင်းပို့ပါ။
KEYWORDS: comorbidities; hypersexuality; phenomenology; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive
Hypersexual ရောဂါ (HD ကို) [, ပြင်းထန်သောထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကတိုကျတှနျးနှင့်ဆေးပညာသိသိသာသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်1,2,3] ။ Kafka  hypersexual ရောဂါတစ် Diagnostic အတွက်အမျိုးအစားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲအဖြစ်ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းအဆိုပြု, 5th ထုတ်ဝေ (DSM-5) , ဒါပေမယ့်အဆိုပြုချက်ကိုနောက်ဆုံးတွင်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ ပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ [hypersexual ရောဂါအပေါ်စမ်းသပ်သုတေသန၏မရှိခြင်းခဲ့သည်5,6] ။ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး, ICD-11 ၏လာမည့်ဗားရှင်းမှာတော့ hypersexual ရောဂါ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားပါလိမ့်မည် .
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာနံပါတ်များကို (ယောက်ျားတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုအားဖြင့်ပြသထားပါသည်n = 1151) နှင့်အမျိုးသမီး (n ယောက်ျား၏ 1174% တွေ့ရှိခဲ့နှင့်အမျိုးသမီး၏ 10.3% မှုကြောင့်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်အတွက်အခက်အခဲများမှဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရောက်သောအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းပြသသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ = 7)  ။ hypersexual အပြုအမူများ၏သရုပ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှစ်ဦးစလုံးပါဝငျနိုငျပါသညျ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှု Kafka စံနှင့်အညီ hypersexual ရောဂါရောဂါခံလူတို့အားဦးဆောင်သောအသုံးအများဆုံးအပြုအမူပင်ဖြစ်သည် [3,9].
Cooper က  လက်လှမ်း၏ triad ကြောင်းတတ်နိုင်ထောက်ပြနှင့်အမည်ဝှက်သူတို့မသက်ဆိုင်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအခက်အခဲများ, အမည်ဝှက်ကိုကြိုက်သမျှအကြောင်းအရာဝင်ရောက်ဖို့လူတွေကိုနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပုံစံများ [အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံအချို့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားကိုအလွန်ကွဲပြား11] အခြားသူများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဘို့မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးသော်လည်း  ။ အလွန်အကျွံအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အဓိကမောင်းနှင်မှုတပ်ဖွဲ့များ [လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏နီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများ၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဆက်စပ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆန္ဒပြည့်စေခြင်းငှါ13].
Little က HD ကိုအတူလူများ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုခြင်းမရှိဘဲလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဒေတာများ, HD နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်အတူပါဆုံးဘာသာရပ်များရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၌နေသောအကြံပြု, ပညာတတ်များနှင့်အလုပ် ; သို့သော်များစွာသောလည်း [မိသားစုနှင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတစ်သမိုင်းထံမှကြောင့်ဆဲပါမှရငျးနှီးလိုငွေပြမှုသတင်းပို့15] ။ ညစ်ညမ်း၏ intensive အသုံးပြုမှု [16,17] နှင့်အထွေထွေ [အတွက် hypersexual အပြုအမူ18] အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီ။ လေ့လာရေး [စိတ်ရောဂါ comorbidities, အထူးသဖြင့်ခံစားချက်မမှန်, ခံစားချက်မမှန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက် 72% -90% ကနေအထိနှုန်းထားများနှင့်အတူ HD မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ14,19,20,21] နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက် 42%  ။ hypersexual ရောဂါနှင့် Impulse အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်တွေ့ရှိချက်များရောထွေးဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ [23,24] hypersexual ရောဂါများအတွက်အဆိုပြုစံကျေပွန်ကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီ၏ % 48 အကြားနှင့် 53.3% Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံအတွက်မြင့်မားသော Impulse ပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိဒ်, ဘာလင်နှင့် Kingston  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ၏ context-တိကျတဲ့ပုံစံကြောင်းအကြံပြုပေမယ့်မရယေဘုယျ Impulse, hypersexual ရောဂါအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ Hypersexual အပြုအမူ [အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက် neuropsychological ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသထားသည်26] နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု [27,28].
တစ်ဇီဝရှုထောင့်ကနေ, အ testosterone ဟော်မုန်းစနစ်က [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ29] ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အန်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့တဲ့အမှတ်အသားအဖြစ်, ဒုတိယနှင့်စတုတ္ထဂဏန်း (2D: 4D) ၏အလျား၏အချိုးသုံးနိုငျနှင့်လျှော့ချ 2D အချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်: 4D အချိုး hypersexual အပြုအမူနဲ့ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါ  ရောနှောတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်။ [2D အချိုး (ကပိုပြီးပုလ်ပုံစံ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်ပိုပြီးအမျိုးအနွယ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအရေအတွက်ကိုရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်: အထွေထွေလူဦးရေ၏အချို့လေ့လာမှုများတစ်ဦးအောက်ပိုင်း 4D ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ30,31,32], အခြားသူများမြင့်မား 2D ကြောင်းပြသကြသော်လည်း: 4D အချိုးလူကရာဆက်စပ်နေသည် .
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ [အဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့စံဖြည့်ဆည်းသူများ၏ကြီးမားသောနမူနာအတွက် hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား၏လက်တွေ့နှင့်အချို့သောသတ်သတ်မှတ်မှတ် (neuro-) ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်3] ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ထို့အပွငျအသေးစိတ်စမ်းသပ်မှု [ထိုကဲ့သို့သောအတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်များ, ဆိုလိုသည်မှာ, ဆိုးရွားသောကလေးဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်ပူးတွဲမှုအခက်အခဲများအဖြစ် hypersexual အပြုအမူမှပံ့ပိုးအလားအလာအန္တရာယ်အချက်များ, ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်တယ်34] အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအစောပိုင်းအသက်အရွယ်  ။ ကျနော်တို့အရင်ကနှိုင်းယှဉ်နမူနာများတွင်တိုင်းတာမဟုတ် parameters တွေကိုအပေါ်ဒေတာကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ hypersexuality ၏လက်ရှိနားလည်မှုအလင်း၌ရလဒ်များဆွေးနွေးပါ။
2 ။ စမ်းသပ်ပုဒ်မ
2.1 ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှု
2.1.1 ။ Hypersexual Disorder Group မှ
HD ကိုအတူယောက်ျားဒီဇင်ဘာလ 2016 နှင့်သြဂုတ်လ 2017 လက်တွေ့စိတ်ပညာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ပုဒ်မကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှတဆင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, လူမှုစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Hannover Medical School ကျောင်းတွင်မ, ဂျာမနီမှာ Psychotherapy အကြားစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဒေသခံသတင်းစာများနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာ (ဥပမာအားဖြင့်ဖွင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်, www.facebook.com, www.instagram.com) နှင့် (မြင်လေ့လာမှုမှာပါဝင်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြ HD ကိုအတူ 539 Self-ဖော်ထုတ်အမျိုးသားများတွင်ရလဒ် ပုံ 1) ။ Two-တရာ-and ခြောက်ဆယ်ယောက်ျားတစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တောင်းအီးမေးလျမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ငါးဆယ်ကိုးတစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးထားသူ 260 တစ်ဦးချင်းစီ၏ [တယ်လီဖုန်းဖြင့်ရောက်ရှိမရနိုင်တော့ပေမယ့်ကျန်ရှိ 201 Kafka ရဲ့သုံးပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားစိတ်ပညာရှင်ကဆောင်ရွက်အကြောင်းကို 45 မိနစ်တစ် Semi-စံချိန်စံညွှန်းမီတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတွင် hypersexual ရောဂါအတှကျအပြခံခဲ့ရ3] စံအဆိုပြုထား။ သူတို့ Kafka ရဲ့ [မပြည့်စုံလျှင်တစ်ဦးချင်းစီကိုလေ့လာဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ကြ3] hypersexual ရောဂါများအတွက်စံအဆိုပြုထား။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့မေးခွန်းအရည်အချင်းပြည့်မီသင်တန်းသားများ mail ဖြင့်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏ရမှတ် cut-off (53) Hypersexual အပြုအမူ Inventory 19 ၏မရောက်နိုင်ဘူးသုံးခုသင်တန်းသားများကို  post ကို hoc ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ Kafka ရဲ့  hypersexual ရောဂါများအတွက်စံသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အပြုအမူတွေကနေပျေါပေါကျကြောင်းဆေးပညာသိသာထင်ရှားသောရောဂါလက္ခဏာများထားရှိရေးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုထိန်းချုပ်ရန်ရုန်းကန်ကာ exogenous ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်တိုက်ရိုက်ဇီဝကမ္မအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မဟုတ်6လကျော်ကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရ။ ခုနစ်ဆယ်သုံးယောက်ပြခဲ့ကြသူ 201 တစ်ဦးချင်းစီ၏ဤစံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်လေ့လာမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီယူဆကြသည် ဟူ. ၎င်း, 50 ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်သူတို့ hypersexual ရောဂါအုပ်စုတွင် (HD ကိုအုပ်စုတစ်စုတွေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပုံ 1 ဇယား) ။
ပုံ 1 ။ အဆိုပါ hypersexual ရောဂါအုပ်စုန်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
2.1.2 ။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများ
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဟာ Hannover Medical School ကျောင်းတွင်မ, ဂျာမနီ, အင်ထရာနက်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်တစ်ဦးချင်းစီ (မြင်ကြော်ငြာများမှတုန့်ပြန် ပုံ 2) အဘယ်သူကို၏ 56 တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တောင်းအီးမေးလျမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်ကိုးကဤ 56 ၏စိစစ်ဘို့တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ရောက်ရှိခဲ့လို့မရပါ။ အဆိုပါထိန်းချုပ်မှု (အသက်အဘို့အလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်p = 0.587) နှင့်ပညာရေး (p HD ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ = 0.503) ။ နှစ်ခုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကနေ data ကိုနောက်ပိုင်းတွင် (တဦးတည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လေ့လာဖို့ကြိုတင်တစ်ဦးဦးခေါင်းတွင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာအစီရင်ခံ, တလိင်တူဆက်ဆံသူ orientation ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, တဦးတည်းကိုထိန်းချုပ်ပါဝင်သူအကဲဖြတ်မှတက်မပြခဲ့ပါဘူး) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
ပုံ2။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
2.1.3 ။ ဖယ်လိုအပ်ချက်
အားလုံးပါဝင်သူများအဘို့ဖယ်စံခဲ့ကြသည်: ပညာတတ်မသန်စွမ်း (Wechsler အရွယ်ရောက် Intelligent စကေး-IV ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်), အပေါ်တစ်ဦး (DSM-IV ဝင်ရိုးတန်း 1 မမှန်များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး, SCID-ငါနှင့်အတူအကဲဖြတ်) psychotic ရောဂါ, ပြင်းထန်သောဦးခေါင်းဒဏ်ရာ, လိင်တူဆက်ဆံသူ orientation ကို အဆိုပါ Kinsey စကေးနှင့် (က semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာအင်တာဗျူးအတွက်အကဲဖြတ်) pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကို။ ငါတို့ရဲ့ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ကျနော်တို့လာမည့်စမ်းသပ်ချက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများလိင်ကွဲသဘောသဘာဝကြောင့်လိင်ကွဲသင်တန်းသားများကိုအာရုံစိုက်စီမံကိန်းကို။ အားလုံးပါဝင်သူတချို့လိင်တူချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တစ်ခုသမိုင်းအစီရင်ခံပေမယ့်သူတို့ရဲ့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုအမြိုးသမီးမြား၌ပါသောကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးသင်တန်းသားများပါဝင်မတိုင်မီရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးနှင့်ပါဝင်မှုများအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့အချိန်မရွေးလေ့လာမှုကနေဆုတ်ခွာနိုင်ကြောင်းအသိပေးခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ပါတယ်နှင့် Hannover Medical School ကျောင်းတွင်မ, ဂျာမနီ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မရှင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံရလဒ်တစ် neuropsychological စမ်းသပ်ဘက်ထရီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ပါဝင်သည့်ပိုမိုကြီးမားအကဲဖြတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရယူခဲ့ကြသည်။
(1) sociodemographic, neurodevelopmental နှင့်မိသားစုအချက်များ, (2) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ရောဂါ comorbidities အပါအဝင် (3) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ: အဆိုပါ variable တွေကိုသုံးအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတိအကျဖော်ပြချက်များအတွက်ဖို့မှတ်စုကိုတွေ့မြင်ကျေးဇူးပြုပြီး စားပွဲတင် 1, စားပွဲတင် 2, စားပွဲတင်3နှင့် စားပွဲတင် 4.
စားပွဲတင် 1 ။ Sociodemographic, neurodevelopmental နှင့်မိသားစုအချက်များ။
စားပွဲတင်2။ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ။
စားပွဲတင်3။ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ။
စားပွဲတင်4။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် comorbidities ။
2.2.1 ။ Sociodemographic, Neurodevelopmental, နှင့်မိသားစုအချက်များ
တစ်ဦးကမေးခွန်းလွှာ sociodemographic ဒေတာ, အမည်ရအသက်, အမြင့်ဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ, အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ, တစ်သက်တာပြစ်မှုဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာ status ကိုစုဆောင်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ neurodevelopmental ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမွေးဖွားမှာအနေအထား, မွေးဖွားမှာမိဘကျန်းမာရေးနှင့်မိခင်နှင့်ဖခင်၏အသက်အရွယ် sibling လည်းရှိခဲ့သည်။ ဆန္ဒရှိကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ [သည့်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာ (CTQ) နဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်37] ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးအဆိုပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့် neurodevelopmental ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမွေးဖွားပြဿနာများ, အချိန်ကြာမြင့်စွာ bedwetting, နှောင့်နှေးလမ်းလျှောက်, နှောင့်နှေးမိန့်ခွန်းဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်သတိလစ်မေ့မြောမှဦးဆောင်ကလေးဘဝမတော်တဆမှုခဲ့ကြသည်။ သန်သည့် Edinburgh သန် Inventory တစ် 10-item ကိုလိုက်လျောညီထွေသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်  နှင့် 2D: 4D အချိုးတစ်ခရီးဆောင်ကင်နာမှရရှိသောရုပ်ပုံများကို အသုံးပြု. ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ : လက်ျာ၏ဂဏန်း၏အရှည်နှစ်ခုကိုသုတေသနလက်ထောက် (အချင်းချင်းအဆင့်သတ်မှတ်သူယုံကြည်စိတ်ချရသဖြင့်လွတ်လပ်စွာခန့်မှန်းခဲ့ကြသည် r = 0.83) နှင့်တွက်ချက်မှုနှစ်ခု ratings ၏နည်းလမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။
ထောက်လှမ်းရေး [သည့် Wechsler အရွယ်ရောက် Intelligent စကေး (WAIS-IV) ၏စတုတ္ထစာစောင်လေး subtests ကနေခန့်မှန်းခဲ့သည်39] ဂျာမန် WAIS-IV ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အများဆုံးအလွန်အမင်းအပြည့်အဝစကေးအိုင်ကျူဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကားလေး subtests ဝေါဟာရ (နှုတ် comprehension ပါ၏ r = 0.7), Block ကိုဒီဇိုင်း (သိမှုဆိုင်ရာအာရုံဆင်ခြင်ခြင်း; r = 0.65), ဂဏန်းသင်္ချာ (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်; r = 0.73) နှင့် (အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်း Coding; r = 0.5) ။
2.2.2 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ခဏာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အပြုအမူတစ်ခု Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာအင်တာဗျူးနှင့်မေးခွန်းအစုတခုကနေတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကြိုတင်အကဲဖြတ်ဖို့သီတင်းပတ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏တစ်သက်တာစုစုပေါင်းကြိုတင်အကဲဖြတ် (ကြာချိန်နှင့်ကြိမ်နှုန်း) မှတစ်ပတ်အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပထမဦးဆုံးအသုတ်ရည်လွှတ်မှာအသက်အရွယ်အပေါ်ဒေတာစုဆောင်း။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ရေးရာအရေအတွက်, paraphilias, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ, ကလေးအလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်တွေ၏စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ကြာချိန်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအကဲဖြတ်။ တိကျတဲ့တူရိယာ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီးကျရောက်နေတဲ့ (လိင်စိတ်လှုပ်ရှားစကေး, SES နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးစကေး, မောင်လေးကလည်း) တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်40] hypersexual ရောဂါ (Hypersexual အပြုအမူ Inventory-19, HBI-19) ၏ရောဂါလက္ခဏာများ  ဘာစွဲ (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတိုဗားရှင်းကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း, sIATsex လက္ခဏာတွေ;  နှင့်လိင်စွဲလမ်း (လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်-Revised, SAST-R) .
2.2.3 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် Comorbidities
စိတ်ရောဂါ comorbidities အဆိုပါ SCID-ငါ [၏ဂျာမန်ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ရောဂါခဲ့ကြသည်43] ။ အပိုဆောင်းမေးခွန်း [Impulse (Barrat Impulse စကေး-11, bis-11) အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်44] ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (နီကိုတင်းမှီခိုဘို့Fagerströmစမ်းသပ်ခြင်း, FTND)  အရက်သုံးစွဲမှု (အဆိုပါအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း, စာရင်းစစ်) ၏, အန္တရာယ်ရှိသောနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောပုံစံများ  စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ (Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory-II ကို, BDI-II ကို)  bonding (ပိတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး-Revised အတွက်အတွေ့အကြုံများ, ECR-R)  alexithymia (တိုရွန်တို Alexithymia စကေး, TAS-26)  နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း (ERQ, Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေမေးခွန်းလွှာ ; Fragebogen ဇုရ Erhebung der Emotionsregulation, ခံစားချက်တွေကို-E ကို .
အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) [သည့် Wender Utah ခဲ့သည် Rating စကေး (WURS-K) နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ရမှတ်≥15၏အခြေခံပေါ်မှာသိလိုက်ရတယ်52] နှင့် ADHD Self-အကဲဖြတ်စကေး (ADHS-SB) .
2.2.4 ။ Logistic Regression အားသုံးသပ်ခြင်း
hypersexual ရောဂါအတှကျအဖြစ်နိုင်သမျှကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ dichotomous မှီခို variable တွေကိုအဖြစ်အုပ်စုတစုခွဲခြားအတူ binary Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်သယ်ဆောင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က HD ကိုအတူယောက်ျားနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားမတူညီကြောင်းအချက်များခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်သော variable တွေကိုအရေအတွက် [Agresti နေဖြင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ54] (စ။ 138) ။
2.3 ။ ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS စာရင်းအင်းဗားရှင်း 24 (IBM ကအတူကွပ်မျက်ခံရခဲ့သည်® ကော်ပိုရေးရှင်း, Amonk, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလွတ်လပ်သောသုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် t-tests, မန်း-Whitney U စမ်းသပ်မှုများသို့မဟုတ် dichotomous variable တွေကိုအဘို့အ Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ်မှု။ အားလုံး polytomous အမျိုးအစား variable တွေကို2ထက်လျော့နည်းအနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်ဆဲလ်ကြိမ်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်အဖြစ်2×5ထက်ပိုကြီးတဲ့စားပွဲများအတွက် Fisher ကစမ်းသပ်မှုကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီကဒီမှာစမ်းသပ်ပြီးလက်တွေ့ variable တွေကို၏သီအိုရီအဆင်းသက်လာအစုံနှင့် ပတ်သက်. hypersexual ရောဂါနှင့်အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားပါဝင်သည်သောပထမဦးဆုံးကျယ်ပြန့်ဖြစ်စဉ်လေ့လာမှုများတဦးဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့အနေနဲ့ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်ဘို့အရွေးချယ်နှစ်ယောက်-Tails အရေးပါမှုကိုအဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းမရှိဘဲ (အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း p <0.05) ။ သို့သော်စိတ်ဝင်စားသောစာဖတ်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Bonferroni သည်အရေးပါမှုကိုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည် စားပွဲတင် 1, စားပွဲတင် 2, စားပွဲတင်3နှင့် စားပွဲတင် 4။ parametric စမ်းသပ်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား Cohen ကိုရဲ့အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် dအတူdသေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း = 0.2,d= 0.5 တစ်ဦးအလတ်စားအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်d= 0.8 ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု  ။ ပျောက်ဆုံးနေဒေတာတွေနဲ့မေးခွန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုအပေါ်အုပ်စုသည်အရွယ်အစားအတွက်မူကွဲရှိပါတယ်။ hypersexual ရောဂါထက်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့, ရှိသမျှအုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်လည်းမဆို SCID-ငါရောဂါများ၏သမိုင်းနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအပြီးတွက်ချက်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတခုလြှော့ N 45 (; HC = 21 HD ကို = 22) ၏။ ဤအဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ရလဒ်များအတွက်တင်ပြကြသည် နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်းများ.
3.1 ။ Sociodemographic, Neurodevelopmental, နှင့်မိသားစုအချက်များ
ဘာသာရပ်ကိုက်ညီခြင်းအားဖြင့်ရည်ရွယ်ပါသည်အဖြစ်အသက်အရွယ် ပတ်သက်. sociodemographic variable တွေကိုမအုပျစုကွဲပြားမှုရှိကြ၏ (t(83) = 0.55, p = 0.587) နှင့်အမြင့်ဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.503; မြင် စားပွဲတင် 1) ။ ဒါ့အပြင်အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်း (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.458), တစ်သက်တာပြစ်မှုဆိုင်ရာသမိုင်း (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.368), နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအဆင့်အတန်း (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.128) အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားသောကြဘူး။ အဆိုပါ subtests ဝေါဟာရအပါအဝင်အသုံးပြုသောလေး WAIS-IV subscales အပေါ်ရမှတ်များမကွဲပြားမှု (လည်းရှိခဲ့သည်t(82) = -1.28, p = 0.204), ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်း (t(82) = 0.92, p = 0.359), ဂဏန်းသင်္ချာ (t(82) = 0.112, p = 0.911), နှင့် coding (t(82) = 1.66, p အုပ်စုများအကြားအလားတူထောက်လှမ်းရေးအဆင့်ဆင့်ကိုညွှန်း = 0.100) ။
neurodevelopmental ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း၏ညွှန်းကိန်းများကလေးဘဝစဉ်အတွင်းယေဘုယျဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချက်များ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (အပါအဝင် HD နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အလားတူခဲ့ကြသည်N = 82), p သန်၏ = 1) ဖြန့်ဖြူး (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.645) နှင့် 2D: 4D လက်ချောင်းအရှည်အချိုး (t(77) = 0.34, p = 0.738) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကို HD ကိုအတူယောက်ျားနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထိုကဲ့သို့သောပါဝင်သူ (ကြီးပြင်းရသောအိမ်ထောင်စုအတွက်သားသမီးများ၏အရေအတွက်ကိုအဖြစ်အလားတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမိသားစုအချက်များနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်ကြီးပြင်းကြောင်းပြသt(78) = 0.01, p = 0.995); မွေးဖွားနိုင်ရန်အတွက်အနေအထား (w(78) = 718, z = -0.402, p = 0.687); အိမ်သူအိမ်သားအတွက်သားတို့တှငျအအနေအထားကို (w(78) = 750, z = -0.464, p = 0.642); မွေးဖွားချိန်တွင်မိခင်အသက် (t(79) = 0.88, p = 0.384); နှင့်ကလေးမွေးဖွားမှာအဖေဘက်ကအသက်အရွယ် (t(73) = 0.09, p = 0.93) ။ HD ကိုအတူယောက်ျားကပိုမကြာခဏမိခင်စိတ်ရောဂါပြဿနာများ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်N = 62), p = 0.001), မဟုတ်စိတ်ရောဂါပြဿနာများ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (paternalN = 68), p = ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် 0.307) ။ ထို့အပွငျ, HD နှင့်အတူယောက်ျား၏ဆန္ဒရှိကလေးဘဝအမှတ်တရများကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကနေသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ HD ကိုအတူယောက်ျားခြုံငုံဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (CTQ ၏မြင့်မားသောနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်; t(68) = 2.71, p = 0.009,dအထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုများတွင် = 0.57), (t(73) = 3.53, p <0.001,d= 0.73), စိတ်ခံစားမှုလျစ်လျူရှု (t(81) = 2.46, p = 0.016,d= 0.54) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (t(45) = 2.49, p = 0.017,dကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် = 0.49) ။ သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (t(80) = 1.60, p = 0.113) နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျစ်လျူရှု (t(83) = 1.49, p = 0.141) စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူး။
3.2 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ခဏာ
HD ကိုအတူယောက်ျားကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း (တွေ့မြင်သိသိသာသာကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြား စားပွဲတင် 2) ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ HD ကိုအတူယောက်ျားထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုထက်အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သညျ။ HD ကိုအတူယောက်ျား (သူတို့ masturbating စတင်ခဲ့သည့်အခါသူတို့အငယ်တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ကြကြောင်းအစီရင်ခံt(79) = 3.59, p <0.001,d= 0.80) နှင့်သူတို့ပထမဦးဆုံး ejaculated သည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်အငယ် (t(77) = 2.79, p = 0.007,d= 0.63) ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ (ပထမလိင်ဆက်ဆံမှု၏အသက်အရွယ်အတွက်ကွဲပြားဘူးt(83) = 1.868, p = 0.065) ။ HD နဲ့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား (လအတွင်းနောက်ဆုံး / လက်ရှိဆက်ဆံရေးအလားတူကြာချိန်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်t(42) = 0.14, p = 0.886) နှင့်သားသမီးများ၏အရေအတွက်သည် (w(75) = 728, z = -0.081, p = 0.936) ။ သို့သျောလညျးကို HD နှင့်အတူယောက်ျားကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကနေသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်ကွဲပြားပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, HD နှင့်အတူယောက်ျား (အကြောင်းကိုရှစ်ဆယ်ကပိုအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အစီရင်ခံတင်ပြw(79) = 470.5, p = 0.001) နှင့်အမျိုးသမီး coital မိတ်ဖက် (w(81) = 443, p <0.000) ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်။ ထို့အပြင် HD လိင်ဆက်ဆံသောအမျိုးသားများသည်လိင်ကွဲလိင်ကွဲပြားမှုကို ဦး တည်နေသော်လည်းအမျိုးသားလိင်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များပိုမိုရှိသောယောက်ျားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည် (w(83) = 567.5, p <0.000) နှင့်အထီးလိင်အင်္ဂါမိတ်ဖက် (w(83) = 664, p = 0.002), ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားနှင့်အတူနီးပါးမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသတင်းပေးပို့သော်လည်း။ ထို့အပွငျ, HD နှင့်အတူယောက်ျားသူတို့နောက်ဆုံးသို့မဟုတ်လက်ရှိဆက်ဆံရေးဟာ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (စဉ်အတွင်းဇာတ်ခင်းခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်N = 81), p <0.001), 67% ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်သာ 19% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိစ္စအစီရင်ခံနှင့်အတူ။ ထို့အပြင် HD ရှိသည့်အမျိုးသားများသည် sIATsex ရမှတ်နှင့်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုအားဖြင့်ညွှန်ပြထားသောကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုများထက်အွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများမှပြproblemsနာများပိုမိုများပြားသည်ကိုတင်ပြသည်။t(80) = -11.70, p <0.001,d= 2.45) ။ ထို့ကြောင့်သူတို့အကဲဖြတ် (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (ရှေ့တော်၌ထိုအပတ်အတွင်းတွင်ပိုမိုမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးကြောင်းအစီရင်ခံN = 84), p <0.001) HD နှင့်အတူအမျိုးသား ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံးသုံးကြိမ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုတွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ထို့အပြင် HD ရှိအမျိုးသားများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်မိနစ် ၇၀ ခန့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည် (t(47) = -3.61, p = 0.001,d= ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် 0.73) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Duration: ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသာ 9% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုတစ်ပတ်ကိုတစ်နာရီကျော်စောင့်ကြည့် HD ကိုအတူယောက်ျား၏ထက်ဝက်ထက်အတူအုပ်စုများအကြားကိုအလွန်ကွဲပြား။ : လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီးသက်ဆိုင်သော, HD ကိုအတူယောက်ျားကပိုသိသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (SES အစီရင်ခံတင်ပြ t(83) = 5.01, p <0.001,d= 1.09), စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး (SIS2: t(83) = -3.75, p <0.001,d= 0.82) ။ သို့သျောလညျးကို HD နှင့်အတူယောက်ျားစွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက် (SIS1 ၏ရိပ်မိခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ပြသ; t(80) = 2.30, p = 0.024,d= 0.48) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကဖော်ပြခဲ့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့ HD နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (နဲ့အတူအမျိုးသားများတွင်အလားတူခဲ့N = 85), p = 0.765), အထူးသမျှ erectile ရောဂါအတွက်ကွဲပြားမှု, hypoactive အလိုဆန္ဒရောဂါ, အရွယ်မတိုင်မီနှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ရှိခဲ့သည်။
exhibitionism, voyeurism, masochism, sadism, fetishism, frotteurism သို့မဟုတ် transvestism တူသော Paraphilias HD ကိုအတူယောက်ျားပိုမိုပျံ့နှံ့ခဲ့ကြ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p <0.001) (ကြည့်ပါ စားပွဲတင် 3) ။ HD ကိုအတူယောက်ျား (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (လည်းလိင် coercive အပြုအမူသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်N = 85), p <0.001) နှင့်သူတို့၏အသက်တာတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကလေးသူငယ်များအလွဲသုံးစားမှုပြုခြင်းပုံများကိုစားသုံးခြင်းပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထား (Fisher ၏တိကျသောစစ်ဆေးမှု (N = 82), p = 0.009); ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအဘယ်သူအားမျှမဖျက်ဆီးကလေးကအလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်တွေရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
3.3 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် Comorbidities
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, HD ကိုအတူယောက်ျား (တွေ့မြင်ပိုပြီးမကြာခဏထိုကဲ့သို့သော ADHD ၏စိတ်ကျရောဂါ, Impulse သို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာအဖြစ်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေထင်ရှား စားပွဲတင် 4) ။ SCID-ငါအမျိုးအစားခွဲများ၏လက်ရှိ diagnoses ၏သီးခြားဆန်းစစ်သည့် HD ကိုအုပျစု (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (ထဲမှာအကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းထင်ရှားN = 85), p = 0.015) ။ diagnoses ၏ဤတိုးပွားလာမှုနှုန်းကို HD (BDI-II ကိုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ psychometric အကဲဖြတ်များကထောက်ခံခဲ့သည်; t(79) = 5.47, p <0.001,d= 1.13) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်မှီခို၏လက်ရှိ SCID-ငါရောဂါများ၏နှုန်းထားများနှစ်ခုအုပ်စုများ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (အလားတူခဲ့ကြသည်N = 85), p = ရုံအရက်သေစာသုံးစွဲမှု (စာရင်းစစ်၏ psychometric အကဲဖြတ်အဖြစ် 1.000), t(82) = -0.93, p = 0.354) နှင့်နီကိုတင်းအလွဲသုံးစားမှု (FTND; t(83) = 0.73, p = 0.471,d= 0.16) ။ လက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏သို့သော်နှုန်းထားများ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.690), obsessive-compulsive မမှန် (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 1.000), နှင့် somatic ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့မမှန်မစား (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 1.000) သည်အုပ်စုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ အတူတူယူ, HD နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားလက်ရှိ SCID-ငါ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (အလားတူအချိုးအစားပြသN = 80), p = 0.104) နှင့်တစ်သက်တာ SCID-ငါရောဂါ (Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ် (N = 85), p = 0.190) ။ သို့သျောလညျးကို HD နှင့်အတူယောက်ျားအကဲဖြတ် (ADHS / SB ၏ထိုအချိန်က ADHD ၏ရောဂါလက္ခဏာများပြသဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြ၏ t(73) = 6.31, p <0.001,d= 1.37) နှင့် ADHD (WURS-K သည်၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရောဂါလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံရန်; t(82) = 3.76, p <0.001,d= 0.82), ထို့အပွငျ, HD နှင့်အတူယောက်ျားကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (bis-11 ထက် သာ. ကြီးမြတ် Impulse ထင်ရှား; t(81) = 3.76, p <0.001,d= 0.83) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်စပ်လျဉ်းရလဒ်ရောနှောခဲ့ကြသည်: HD ကိုအတူယောက်ျား maladaptive စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာများ (ခံစားချက်များကို-E-maladaptive မဟာဗျူဟာများသုံးစွဲဖို့ကပိုဖွယ်ရှိကြ၏ t(81) = 3.54, p <0.001,d= 0.78) နှင့် "reappraisal" မဟာဗျူဟာများ (ERQ: Reappraisal; t(83) = -2.477, p = .015,d= 0.545) ဒါပေမယ့်သပ္ပါယ်မဟာဗျူဟာများ (ခံစားချက်များကို-E-သပ္ပါယ်မဟာဗျူဟာ၏အသုံးပြုမှုကို; t(81) = -1.26, p က "ဖိနှိပ်မှု" မဟာဗျူဟာများ (ERQ အသုံးပြုမှုဖြစ်သကဲ့သို့ = 0.212) အလားတူဖြစ်ခဲ့သည်: နှိမ်နင်းရေး; t(83) = 1.852, p = 0.068) ။ HD ကိုအတူယောက်ျား alexithymia (TAS-26 ပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်; t(79) = 4.11, p <0.001,d: = 0.92) နှစ်ဦးစလုံး, ပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်ပူပန် (ECR-R ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ရမှတ်တိုးမြှင် t(78) = 5.413, p <0.000,d= 1.245) နှင့်ပူးတွဲဖိုင်ကို-related ရှောင်ရှားခြင်း (ECR-R ကိုရှောင်ရှားခြင်း: t(82) = 4.908, p <0.000,d= 1.064) ။
3.4 ။ Logistic Regression အားသုံးသပ်ခြင်း
HD ကိုအတူယောက်ျားနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားအကောင်းဆုံးမတူညီသော variable တွေကို (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏စတင်ခြင်းမှာအသက်အရွယ် (OR = 0.55, 95% CI (0.35, 0.86)) နှင့်ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲမှုစတိုင်ခဲ့ကြသည်OR = 1.06, 95% CI (1.01,1.11)) ။ non-သိသာကလေးက traumata နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှုစတိုင်ခဲ့ကြသည်။ သတ်မှတ်ထားသောဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ် Nagelkerke နှင့်အတူ (အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်ခဲ့ R2 = 0.55 နှင့် Hosmer-Lemeshow စမ်းသပ်ခြင်း: χ2(7) = 11.76, df = 7, p = 0.11) နှင့်အုပ်စုနှစ်စုအကြားကှဲလှဲ၏အကြောင်းကို 55% ကရှင်းပြသည်။ ယုတ်ခွဲခြားတိကျမှန်ကန်မှု 80.0% (78.1% တိကျတဲ့, 81.4% sensitivity ကို) ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုက [hypersexual ရောဂါများအတွက်အဆိုပြုစံတွေ့ဆုံခဲ့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမားသောနမူနာအနေဖြင့်ဖြစ်စဉ် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်3] ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ တစ်ဦးကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ sociodemographic, neurodevelopmental အရေအတွက်နှင့်မိသားစုအချက်များအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် comorbidities စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
variable တွေကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ထား၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့်ဒီလေ့လာမှု hypersexual ရောဂါနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုရောဂါကြောင့်လူအကြားအရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, HD ကိုအတူယောက်ျားငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းဆိုးရွားသောအတှေ့အကွုံပုံစံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ကြစိတ်ရောဂါပြဿနာများနှင့်အတူမိခင်တစ်ဦး, ဖူးဖို့နဲ့ကလေးဘဝ ADHD ၏ရောဂါလက္ခဏာပြသကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ခြင်း, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းပိုပြီးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြပုံရသည်။ ထို့အပွငျအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်သိသာရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အတူပူးတွဲမှုအခက်အခဲများ, HD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏စတင်ခြင်း, HD နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာသူတို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးမှုကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့, ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးခံစားခဲ့ရသညျ။ ထို့အပွငျ, HD နှင့်အတူယောက်ျားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသူတို့၏မြင့်အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်ကြားမှုများမှတဆင့်ပေါ်ထွက်လာသောပြဿနာများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် paraphilia ပို deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, အမည်ရပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်း, လိင် coercive အပြုအမူ, နှင့်ကလေးအလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်တွေ၏စားသုံးမှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Impulse အဖြစ်စိတ်ရောဂါ comorbidities ၏ကြီးမားသောထား၏အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်ခြင်းနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ၏ Diagnoses, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD, alexithymia နှင့် maladaptive စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ၏ရောဂါလက္ခဏာများကို HD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက HD နှင့်အတူယောက်ျား၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏ညွှန်းကိန်းများရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှော့ချ reappraisal သောကြောင့်နမူနာ, အလုပ်မဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာများနှင့် maladaptive မဟာဗျူဟာများတိုးမြှင့် HD ကိုအဖြစ်တိုးမြှင့် alexithymia နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ HD ကိုအတူယောက်ျားဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံမြင့်မားမှုနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်; စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းအခက်အခဲများမှဆက်စပ်ခံရဖို့ပြခဲ့ကြရာတိုးတက်သစိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများစွာအထူးသဖြင့်နှုန်းထားများ  ။ ထို့အပွငျ, HD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် maladaptive စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ [ကလေး၏မိခင်အားဖြင့်ကြုံတွေ့ယင်းစိတ်ရောဂါအခက်အခဲများအားဖြင့်တိုးပွားလာကြမည်အကြောင်း,58] HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ [HD ကိုတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း maladaptive စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်နှင့်အတွေ့အကြုံများတဲ့စီးရီးကနေတစ်ဆင့်ကြောင်းငြင်းခုန်34] ။ သူတို့မိခင်များမှ non-လုံခြုံပူးတွဲမှု၌ရှိကြ၏သည့်အခါကလေးများအလုပ်မဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာများပြသအဖြစ်ထိုမှတပါး, အလုပ်မဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ [ကျနော်တို့ HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာပူးတွဲအခက်အခဲများမှဆက်စပ်စေခြင်းငှါ59] ။ ဂျာမန်လူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစစ်တမ်းအတွက်, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာ [စိုးရိမျတဦးချင်းစီတွဲမှဆက်စပ်ခဲ့သည်60] ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ [Katehakis ရဲ့နှင့်အညီဖြစ်သော, HD ကိုအတူယောက်ျားနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားမတူညီဘဲအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ရှောင်ရှားပြသ34တချို့ HD ကိုလူနာကလေးဘဝစဉ်အတွင်းစိတ်ခံစားမှု disengaged ကြစေခြင်းငှါ] အကြံပြုချက်။ ဒါက [ကြောင့်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဗဟိုအာရုံကြောစနစ်နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုဆိုးရွားသောအပြန်အလှန်ရန်, ချို့ယွင်းသည့် limbic စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် prefrontal cortex ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဦးတည်သွားစေခြင်းငှါ34].
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် [အတွက် HD ကိုအတှေ့အကွုံလိုငွေပြမှုနှင့်အတူယောက်ျားစည်းမျဉ်းကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် maladaptive ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာအဖြစ် hypersexual အပြုအမူကိုသုံးပါစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီများမှာ61] ။ ဤရွေ့ကား neurobiological လိုငွေပြမှု [အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီးစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဉာဏစွမ်းရည်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်34] ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ [WAIS-IV subtests ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်သာစိတ်ခံစားမှုမသန်စွမ်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ထောက်လှမ်းရေးမကွဲပြားမှု39] ဒီလေ့လာမှုအတွက်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုသေးငယ်နမူနာအတူလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် .
hypersexual အပြုအမူတစ်ခုသဘောအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HD ကိုအုပျစု Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် HD ကိုအတူယောက်ျားနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားသိသိသာသာမတူညီသည့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခုအစောပိုင်းစတင်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, hypersexual အပြုအမူ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအစောပိုင်းစတင်ခြင်းမှဆက်စပ်လျက်ရှိသည်35] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်  ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်, HD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မသာကြောင်းပြဿနာများအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရလဒ်များ၏အရေအတွက်မှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုသမှု-ရှာ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်အကြားဆက်ဆံရေး linear သည်မဟုတ်, အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ရိပ်မိအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုကကမကထပြုခဲ့ကြောင်း ညစ်ညမ်း  ။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေး salience သီအိုရီ [65,66] HD ကိုအသုံးချခဲ့ပြီးဖြစ်သော [26,62] လှုံ့ဆော်မှု "လို" "အကြိုက်" လှုံ့ဆော်မှုထံမှ dissociated ဖြစ်လာစွဲထဲမှာ posits ။ HD ကိုအတူလူတို့သညျရိပ်မိအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှပြဿနာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်လက်အဘယ်ကြောင့်ဒီအကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။ တကယ်တော့သူတို့၏တိုးလာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအစီရင်ခံစာအတွက် HD ကိုပိုပြီးပြဿနာများနှင့်အတူယောက်ျား။
hypersexual အပြုအမူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီး၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ [ကြီးမားသောစစ်တမ်းများမှာပြထားပြီး35,67] ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအတွက် HD ကိုအုပ်စုတစ်စုကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များရိပ်မိခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အရှင်ပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ်နိုးထဖို့ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်စိတ်နိုးထ၏ဤတိကျတဲ့ပုံစံအလုပ်မဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို အသုံးပြု. နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက် hypersexual ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတော်မူသော, တစ်ဦးအားနည်းချက်အချက်ကြောင်းငြင်းခုန်။ လိင် drive ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်အတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အွန်လိုင်းနမူနာ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအမြင့်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကလေးကအလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်တွေ၏ Self-အစီရင်ခံစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ  ။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဆန့်ကျင်အဖြစ် HD ကိုအတူယောက်ျား၏% 80 မှအစဉ်အဆက်စားသုံးကလေးညစ်ညမ်းရှိသည်ဖို့ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ၏နှုန်းထားများ HD ကိုအတူယောက်ျားကလေးကြမ်းတမ်းပုံရိပ်တွေတို့၏စားသုံးမှုမြင့်မားတိုးတက်လာခဲ့သည်နှုန်းထားများဖေါ်ပြခြင်း, HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism တစ်ခုမျက်မြင်လက်တွေ့ထောက်ခံအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်တွေ့ Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောဤရလဒ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီး  ကျနော်တို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့် HD ကိုအတူလူနာအတွက်အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူအကဲဖြတ်ရန် Clinician တိုက်တွန်းပါသည်။
ထို့အပွငျ, ငါတို့ HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင် paraphilic အကျိုးစီးပွားပိုမိုနှုန်းထားများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အထိ, paraphilic အကျိုးစီးပွားနှင့် HD ကို၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ်ကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်ရှိပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုများ [paraphilic အကျိုးစီးပွားများတိုးမြှင့်နှုန်းထားအကြံပြု14] HD ကိုအဆိုပြုထားစံအဘို့လယ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်သော်လည်း  အဘယ်သူမျှမချိတ်ဆက်မှုကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဂျာမနီမှာသုတေသနနဲ့ကုသမှုအခြေအနေများ၏သင်တန်းကိုသိမ်းယူပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာများလျှို့ဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြောင့်မတူကွဲပြားနှုန်းထားများများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်သူတို့ paraphilic အကျိုးစီးပွား, ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပေါ်အစီရင်ခံစာများပါဝင်သည်လျှင်ပင်, paraphilic အကျိုးစီးပွားအစီရင်ခံရန်ပွင့်လင်းပါလိမ့်မယ် အပြုအမူ။ သူ့ဟာသူ Paraphilic အကျိုးစီးပွား (အဘယ်သူမျှမအခြားသူတွေထိခိုက်နေကြသည်လျှင်) လက်တွေ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်သို့မဟုတ်တရားမျှတပါဘူး ; သို့သော် paraphilic အကျိုးစီးပွားမကြာခဏ [ဆက်ဆံရေးဟာအခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်70] ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, HD ကိုကိုယ်စားပြုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဒီလေ့လာမှုကနေပေါ်ထွက်လာဖို့အဓိကတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုမျဉ်းသား HD မှာတချို့စိတ်ရောဂါ comorbidities လက္ခဏာတွေတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်နှစ်ခုစလုံးလက်ရှိနှင့်တစ်သက်တာလက္ခဏာတွေ၏ diagnoses HD ကိုအုပ်စုတွင်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတော့ BDI-II ကိုတိုင်းတာအဖြစ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်ရမှတ်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု၌ရှိသကဲ့သို့, HD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်နီးပါးသုံးကြိမ်အဖြစ်အဆင့်မြင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, Weiss  စိတ်ကျရောဂါ၏ပျံ့နှံ့အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ထက် HD ကိုအတူယောက်ျားနီးပါး 2.5 ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတူတူ hypersexual ရောဂါအတွက် comorbid အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်စုံစမ်းလေ့လာမှုများတစ်အကွာအဝေး၏ရလဒ်များကို [သည့်ပျံ့နှံ့ 28% နှင့် 42% အကြားဖြစ်ပါသည်အကြံပြု20,70,71] ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ [ကြောင်း Impulse, အထူးသဖြင့်ရှေ့နောက်စကား-တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse သံသယ25] ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်, HD နှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့် Impulse ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံပြီး, hypersexual ရောဂါ၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမကြာခဏတိုးလာ Impulse ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာခုနှစ်တွင်သာကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူ Impulse တိုးလာပေမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏နှုန်းထားများအုပ်စုများအကြားကွဲပြားဘူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု hypersexual အပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ [ရှိပါတယ်22,72,73], ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့လေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာများနှင့်နမူနာအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးကတည်းကပုံ, မရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများ [စိတ်ရောဂါ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးမှဆက်စပ်ခံရဖို့ပြခဲ့ကြရာ, HD နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်အလားအလာအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သင့်တယ်74].
သီအိုရီယူဆချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ hypersexual အပြုအမူများ၏ etiology များအတွက်အလုပ်လုပ်မော်ဒယ် created (ပုံ 3) ။ hypersexual ရောဂါတစ် monocausal etiology မရှိသက်သေအထောက်အထားရှိစဉ်အခါက, မော်ဒယ် hypersexual ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်စေမည်အကြောင်းမျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းများကိုထွက်ထောက်ပြသည်။ ဒါကအလုပ်လုပ်ကိုင်မော်ဒယ်သစ်ကိုသုတေသနမေးခွန်းများနှင့်ကုသရေးအစီအစဉ်များ adapter ထုတ်လုပ်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံ3။ hypersexual ရောဂါအလုပ်လုပ်မော်ဒယ်။ ကျနော်တို့ hypersexual ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေခြင်းအလိုငှါမျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေတစ်ခုနောက်ခံပေါင်းစပ်ယူဆ။ biopsychosocial အချက်များတစ်ပေါင်းစပ်, ဥပမာ, မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအချက်များနှင့်ဆိုးရွားသောကလေးဘဝဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများပုံဖော်နှင့် comorbid စိတ်ရောဂါမမှန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေ။ တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံးလိင်စိတ်နိုးထမျိုးရိုးဗီဇအချက်များချိတ်ဆက်ထားစေခြင်းငှါများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအစောပိုင်းစတင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ, comorbid မမှန်, မြင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏အလုပ်မဖြစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ hypersexual ရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခရေပွင့နှင့်အတူမှတ်သားအဆိုပါအချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုနေ posteriori ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကုသမှုများအတွက်အများအပြားသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျနော်တို့ Clinician ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှုအဖြစ် HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအကဲဖြတ်ရန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ [comorbid အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ၏ရောဂါလက္ခဏာများကို HD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်နှင့်အကဒီလိုလူနာ pharmacotherapy နှင့်ပေါင်းစပ်အပြုအမူကုထုံးကနေအကျိုးခံစားရဖို့များပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားပြီးကြောင်းပြသ75] ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်အလုပ်မဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်လျှော့ချရေးနှင့်အမျှတစ်ဦးသိမြင်-အပြုအမူကုထုံးကိုလည်း HD ကိုအတူအမျိုးသားများတွင် dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်နှင့် Impulse အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်  ။ တစ်ဦးက Non-စျကွောစီရငျကုထုံးချဉ်းကပ်မှု, HD နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏတည်းဟူသော paraphilia ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ HD ကိုအတူယောက်ျားကလေးကြမ်းတမ်းပုံရိပ်တွေ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူနှင့်စားသုံးမှုတိုးပွားလာမှုနှုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်လျှို့ဝှက်၏ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်မရလျှင်, ငါတို့သည် Clinician ကအကဲဖြတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်အပြုအမူကာကွယ်တားဆီးဖို့အကြံပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
5 ။ ကန့်သတ်ချက်
ဒီနမူနာတစ်ဦးချင်းစီ၏ပါဝငျတဲ့လက်တွေ့လေ့လာမှုထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ဘဝဖြစ်ရပ်များ, အတွင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရင်းနှီးသောအသေးစိတ်ကိုသတင်းပို့ဖို့သဘောတူသူကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤနမူနာများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များဝေမျှဖို့တွန့်ဆုတ်နေသော hypersexual ရောဂါနှင့်အတူလူများ၏သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်မည်မဟုတ်ပါ။
2D အချိုး-ကျွန်တော်တစ်ဦး Cross-Section လေ့လာမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက် Self-အစီရင်ခံစာအချက်အလက်များနှင့်လက်တွေ့အင်တာဗျူးအပေါ်မှီခိုလူမှုရေးလိုလားဘက်လိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြပေမည်: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့-နှင့်အတူ 4D ၏ချွင်းချက် HD ကို၏ etiology အကြောင်းကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှင်းလင်းချက်, ဆွဲရန်ခက်ခဲသည်။
တခြားယဉ်ကျေးမှုများဤလေ့လာမှု၏ကောက်ချက်လွှဲပြောင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့အပွငျ, ဒီအနောက်တိုင်းဥရောပနမူနာဥပမာ, အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးအဆင့်ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနောက်တိုင်းဥရောပလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
6 ။ နိဂုံး
HD ကိုအတူယောက်ျားကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတူတူ neurodevelopment ထောက်လှမ်းရေးအဆင့်ဆင့်, sociodemographic နောက်ခံနှင့်မိသားစုအချက်များရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ သို့သော်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထိုသို့သောဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများအဖြစ်အသက်တာ၏အရေးကြီးသောဒေသများရှိ HD ကိုအစီရင်ခံစာကွဲပြားမှုနှင့်အတူယောက်ျား, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အောက်ပါမှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည် https://www.mdpi.com/2077-0383/8/2/157/s1, နောက်ထပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။
စိတ်ကူး, je, TH, uh, THCK, JK; နည်းစနစ်, je, သင်္ဘော MV, CS, ih, THCK, တရားဝင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, je, သင်္ဘော MV, ရေးသားခြင်း-မူရင်းမူကြမ်းပြင်ဆင်မှု, je, အရေးအသား-ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တည်းဖြတ်, je, ih, CS, သင်္ဘော MV, THCK, uh, ကြီးကြပ်မှု, THCK, uh , CS, TH, ရန်ပုံငွေရှာမှီး, THCK, uh, TH, JK
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏အထောက်အပံ့အတွက် Marie-ဂျင်း Carstensen, အန္န Spielvogel နှင့်ဂျူလီယာ Liebnau ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Fong သည်, TW, ရိဒ်, RC; Parhami, ဗြဲအပြုအမူစှဲ။ အဆိုပါလိုင်းများဆွဲရန်အဘယ်မှာရှိသနည်း Psychiatric ။ Clin ။ N. Am ။ 2012, 35, 279-296 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kafka, အမတ် Hypersexual Disorder: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုချက် Diagnosis ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2010, 39, 377-400 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 5th ed .; American Psychiatric Association: ဝါရှင်တန်ဒီစီ, အမေရိကန်, 2013; ISBN 089042554X ။ [Google Scholar]
Kafka, အမတ် hypersexual ရောဂါမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 43, 1259-1261 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Piquet-Pessôa, M က .; Ferreira, GM က; Melca, အိုဝါ; Fontenelle, LF DSM-5 နှင့်စှဲအဖြစ်လိင်, စျေးဝယ်သို့မဟုတ်ခိုးထည့်သွင်းရန်မဆုံးဖြတ်ချက်။ Curr ။ စှဲလမျးသူ။ အစီရင်ခံစာများ 2014, 1, 172-176 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Grant က, je; Atmaca, M က .; Fineberg, NA; Fontenelle, LF; Matsunaga, H ကို .; Janardhan Reddy, YC, Simpson, HB; Thomsen, PH ကို; ဗန် Den Heuvel, oa; နွားငယ်သား, D ကို .; et al ။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့် ICD-11 ထဲမှာ "အပြုအမူစှဲ" ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014, 13, 125-127 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Dickenson ဂျေ; Gleason, N ကို .; Coleman, E ကို .; မိုင်းလုပ်သား, ခကျခဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုကျတှနျးထား, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ၏ MH ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ ဂျေအေအမ်အေ Netw ။ ဖွင့်လှစ် 2018, 1, e184468 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, RC; လက်သမား, BN; ချိတ်, ဖြစ်မှု; Garo, S ကို .; Manning, JC; Gilliland, R ကို .; Cooper က, eb; Mckittrick, H ကို .; Davtian, M က .; Fong သည်, hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်များ၏တီအစီရင်ခံစာ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2012, 9, 2868-2877 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Cooper က, အေလိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ CyberPsychology ပြုမူနေ။ 1998, 1, 187-193 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Cooper က, တစ်ဦးက .; Delmonico, DL; Burg, R. ကျဘာသုံးစွဲသူများချိုးဖောက်မှုများ, နှင့် compulsive: နယူးတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ compulsive ဂျေဆက်ဆံပါ။ prev ။ 2000, 7, 5-29 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
လူငယ်တို့, KS အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းအန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ကုသရေး။ နံနက်။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ 2008, 52, 21-37 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wéry, တစ်ဦးက .; Vogelaere K ကို .; Challet-Bouju, G .; Poudat, အက်ဖ်-X ကို .; Caillon, ဂျေ .; လီဗာ, D ကို .; Billieux, ဂျေ .; Grall-Bronnec တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲပြင်ပလူနာဆေးခန်းများတွင် Self-ဖော်ထုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အမ်လက်ခဏာ။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 623-630 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Carnes, PJ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အတင်းအကျပ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း။ CNS Spectr ။ 2000, 5, 63-72 ။ [Google Scholar]
ကာရိုး, JS; Padilla-Walker က, LM; နယ်လ်ဆင်, LJ; Olson, CD ကို; barry, CM; Madsen, SD ကမျိုးဆက်ကို XXX: လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်အသုံးပြုမှု။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ res ။ 2008, 23, 6-30 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Häggström-Nordin, E ကို .; Hanson, ဦး .; Tydén, ဆွီဒင်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြား T. အစည်းအရုံးများ။ int ။ ဂျေ STD AIDS ရောဂါ 2005, 16, 102-107 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kalichman, SC; ကာဣနဃတစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်ဆေးခန်းကနေန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ ဂျေလိင် Res ။ 2004, 41, 235-241 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Mick, TM အလိုအလျောက်; ဟော်လန်, အီး Impulse-compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS Spectr ။ 2006, 11, 944-955 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Raymond, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား; Coleman, E ကို .; မိုင်းလုပ်သား, MH စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003, 44, 370-380 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
က de Tubino Scanavino, M က .; Ventuneac, တစ်ဦးက .; Abdo, CHN; Tavares, H ကို .; ; Amar, MLSA ပြုပါ Messina, B, .; dos Reis, SC; မာတင် JPLB; Parsons, ဆောပိုလို, ဘရာဇီးအတွက်ကုသမှု-ရှာကြံလူတို့တွင် JT compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် psychopathology ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2013, 209, 518-524 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Carnes မတ်ေတာသဒါဟာ Call မနေပါနဲ့; Bantam စာအုပ်များ: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 1991; ISBN 0-553-35138-9 ။
ရိဒ်, RC; Cyders, MA; Moghaddam, JF; Fong သည်, လောင်းကစားမမှန်, hypersexuality နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် Barratt Impulse စကေး၏ TW Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 1640-1645 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရိဒ်, RC; Dhuffar, MK, Parhami ငါ .; hypersexual ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hypersexual အမျိုးသမီးလူနာနမူနာအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ရှုထောငျ့ Exploring Fong သည်, TW ။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု Pract ။ 2012, 18, 262-268 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရိဒ်, RC; ဘာလင်, HA; Kingston, hypersexual ယောက်ျားအတွက် DA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ။ Curr ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ rep ။ 2015, 2, 1-8 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, RC; Karim က, R ကို .; McCrory, E ကို .; လက်သမား, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုလူတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာအတွက် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် BN ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု။ int ။ ဂျေ neuroscience ။ 2010, 120, 120-127 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Schiebener, ဂျေ .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ညစ်ညမ်းအတူ flyer ပဲရှိသေး? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2015, 4, 14-21 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Baumeister, RF; Catanese, KR; Vohs, KD of sex drive လိင်စိတ်ခွန်အား၌တစ်ဦးကျား, မကွာခြားချက်ရှိပါသလား? သီအိုရီအမြင်များ, အယူအဆဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများ၏သုံးသပ်ချက်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး။ Soc ။ Psychol ။ ဗျာ 2001, 5, 242-273 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hönekopp, ဂျေ .; Bartholdt, L ကို .; Beier, L ကို .; Liebert, ဒုတိယအစတုတ္ထဂဏန်းအရှည်အချိုး (2D: 4D) မှအေနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဟော်မုန်းပမာဏ: နယူးဒေတာနှင့်တစ်ဦး Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychoneuroendocrinology 2007, 32, 313-321 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hönekopp, ဂျေ .; Voracek, M က .; Manning, JT 2nd 4th ဂဏန်းအချိုး (2D: 4D) နှင့်လိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်: အမျိုးသားများတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထား။ Psychoneuroendocrinology 2006, 31, 30-37 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Klimek, M က .; Andrzej, G .; Nenko ငါ .; Alvarado, LC; Jasienska, G. အကိန်းဂဏန်းအချိုး (2D: 4D) လူ့ယောက်ျားအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားညွှန်ပြချက်, testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကလေးများအရေအတွက်အဖြစ်။ အမ်း။ Hum ။ Biol ။ 2014, 41, 518-523 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Varella, MAC; Valentova, ဖက်စပ်; Pereira, KJ; ဘရာဇီးနှင့်ခကျြနမူနာအနေဖြင့်အထောက်အထား: Bussab, VSR ကရာယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ခန္ဓာကိုယ်စရိုက်များ masculine နှင့်ဣတ္နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူနေ။ လုပ်ငန်းစဉ်များ 2014, 109, 34-39 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Katehakis, အေကိုထိခိုက်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်လိင်စွဲလမ်း၏ကုသမှု။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2009, 16, 1-31 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဝေါ်လ်တန်, MT; Bhullar တစ်ခု Impulse Control ကို Disorder အဖြစ် N. compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးဒေတာများကိုစောင့်မျှော်နေရင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2018, 47, 1327-1831 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, RC; Garo, S ကို .; လက်သမား, BN ယုံကြည်စိတ်ချရသော, တရားဝင်မှု, ယောက်ျားတစ်ဦးပြင်ပလူနာနမူနာအတွက် hypersexual အပြုအမူစာရင်း၏ psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2011, 18, 30-51 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bernstein, D ကို .; က Fink, L. အဆိုပါကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာ (CTQ) အတွက်လက်စွဲစာအုပ်; စိတ်ဓာတ်ကော်ပိုရေးရှင်း: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 1998 ။ [Google Scholar]
Oldfield, RC သန်၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဆိုပါ Edinburgh စာရင်း။ Neuropsychologia 1971, 9, 97-113 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wechsler, ဃ WAIS-IV Wechsler အရွယ်ရောက်ထောက်လှမ်းရေးစကေး Deutschsprachige adapter, 4th ed .; Petermann, အက်ဖ်, Petermann, U. , Eds .; Hogrefe: Göttingen, ဂျာမနီ, 2013 ။ [Google Scholar]
Janssen, E ကို .; Vorst, H ကို .; ဖင်လန်, P ကို ​​.; Bancroft, ဂျေအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး (မောင်လေးကလည်း) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (SES) scales: ဗြဲအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကျရောက်နေတဲ့တိုင်းတာခြင်း။ ဂျေလိင် Res ။ 2002, 39, 114-126 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Pawlikowski, M က .; Altstötter-Gleich, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်လူငယ်ရဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း၏တိုတောင်းတဲ့ဗားရှင်း psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2013, 29, 1212-1223 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Carnes, P ကို ​​.; အစိမ်း, B, .; Carnes, အက်စ်ကွဲပြားခြားနားသေးတူညီသော: တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်ကျား, မရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စမ်းသပ်ခြင်း (SAST) ပြသည့်လိင်စွဲလမ်း ပို. ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2010, 17, 7-30 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wittchen, Hu; Wunderlich, ဦး .; Gruschwitz, S ကို .; Zaudig, အမ် နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်ဗြဲ Strukturiertes Klinisches အင်တာဗျူးသားမွေး DSM-IV ။ Achse ငါ: Psychische Störungen။ Interviewheft und Beurteilungsheft ။ Eine deutschsprachige, erweiterte Bearb ။ ဃ။ Originalversion des နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်ငါ amerikanischen; Hogrefe: Göttingen, ဂျာမနီ, 1997 ။ [Google Scholar]
Patton, JH; စတန်းဖို့ဒ်, က MS; Barratt, ES Barratt Impulse စကေး (bis-11) ။ ဂျေ Clin ။ Psychol ။ 1995, 51, 768-774 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Fagerström, OK ကို; နီကိုတင်းမှီခိုဘို့ Schneider, Ng Fagerströmစမ်းသပ်ခြင်း။ J ကိုပြုမူနေ Med ။ 1989, 12, 159-181 ။ [Google Scholar]
Saunders, JB, Aasland, ဩဃ; Babor, TF; de la Fuentes, JR; Grant က, အအရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်ဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ်မှု (စာရင်းစစ်) ၏အမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: WHO ကပူးပေါင်းစီမံကိန်းအားအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အရက်သောက်-II ကိုအတူပုဂ္ဂိုလ်များ၏အစောပိုင်းထောက်လှမ်းပေါ်မှာ။ စှဲမွဲမှု 1993, 88, 791-804 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hautzinger, M က .; Keller, F ကို .; Kühner, C. Beck စိတ်ဖိစီးမှု-Inventar II ကို။ Deutsche Bearbeitung und Handbuch zum BDI II ကို။; Harcourt စမ်းသပ်ခြင်းန်ဆောင်မှုများ: Frankfurt ပင်မ, ဂျာမနီ, 2006 ဖြစ်၏။ [Google Scholar]
Fraley, RC; Waller, Ng; နန်, ka အရွယ်ရောက်ပြီးသူပူးတွဲမှု၏ Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာတစ်ခုကို item တုံ့ပြန်မှုသီအိုရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 2000, 78, 350-365 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kupfer, ဂျေ .; Brosig, B, .; Brähler, အီး TAS-26: တိုရွန်တို-Alexithymie-Skala-26 (Deutsche ဗားရှင်း); Hogrefe: Göttingen, ဂျာမနီ, 2001 ။ [Google Scholar]
စုစုပေါင်း, JJ; နှစ်ဦး Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ယောဟန်သည် OP တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ: အကျိုးသက်ရောက်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်ကောင်းပြီ-ခံ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 2003, 85, 348-362 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Petermann, အက်ဖ် Fragebogen ဇုရ Erhebung der Emotionsregulation Bei Erwachsenen (ခံစားချက်များကို-E) ။ Zeitschrift သားမွေးစိတ်ရောဂါကုသမှု Psychol ။ Psychother ။ 2015, 63, 67-68 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Retz-Junginger, P ကို ​​.; Retz, W .; Blocher, D ကို .; Weijers, အိပ်ချ်-G .; Trott, G. အ-E ကို .; Wender, PH ကို; Rössler, အမ် Wender Utah ခဲ့သည် Rating စကေး (WURS-ဋ) Deutsche Kurzform ဇုရ retrospektiven erfassung des hyperkinetischen syndrome Bei erwachsenen Die ။ Nervenarzt 2002, 73, 830-838 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Rösler, M က .; Retz, W .; Retz-Junginger, P ကို ​​.; Thome, ဂျေ .; Supprian, T က .; Nissen, T က .; Stieglitz, RD; Blocher, D ကို .; Hengesch, G .; Trott, GE Instruments ဇုရ Diagnostik der Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Erwachsenenalter ။ Nervenarzt 2004, 75, 888-895 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Agresti, အေ အမျိုးအစားဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်ခုနိဒါန်း, 2nd ed .; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2018; ISBN 1119405262 ။ [Google Scholar]
Cohen ကို, ဂျေ ယင်းအပြုအမူသိပ္ပံအဘို့အစာရင်းအင်းပါဝါအားသုံးသပ်ခြင်း, 2nd ed .; Erlbaum Associates မှ: Hillsdale, NJ, USA, 1988; ISBN 9780805802832 ။ [Google Scholar]
ပထမဦးစွာကို MB; Spitzer, RL; မျောက်လွှဲကျော်, M က .; ဝီလျံ, JB- DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ Disorder များအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး; နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 1995 ။ [Google Scholar]
Carvalho ဖာနန်ဒို, S ကို .; Beblo, T က .; Schlosser, N ကို .; Terfehr K ကို .; Otte, C ကို .; Löwe, B, .; ဝံပုလွေ, ညီလေး, Spitzer, C ကို .; Driessen, M က .; နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorder နှင့်ဗိုလ်မှူးစီးပွားပျက်ကပ်ထဲမှာ Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေအပေါ်ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ Wingenfeld, K. The Impact ။ ဂျေစိတ်ဒဏ်ရာ Dissociation 2014, 15, 384-401 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Goodman, SH; နှိမ့်မိခင်များ၏ကလေးများအတွက် Psychopathology များအတွက် Gotlib, ih အန္တရာယ်: ဂီယာ၏ယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းတစ် Developmental မော်ဒယ်။ Psychol ။ ဗျာ 1999, 106, 458-490 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရေ SF; Virmani, EA ၏, Thompson က, RA, Meyer, S ကို .; Raikes, HA; Jochem, R. Emotion စည်းမျဉ်းများနှင့်ပူးတွဲမှုနှစ်ခုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်မိမိတို့၏အသင်းအဖွဲ့ကိုဖြည်။ ဂျေ Psychopathol ။ ပြုမူနေ။ အကဲဖြတ်ရန်။ 2010, 32, 37-47 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Beutel, ME, Giralt, S ကို .; Wölfling K ကို .; Stöbel-ရစ်ချတာ, Y ကို .; Subic-Wrana, C ကို .; Reiner ငါ .; Tibubos, AN; Brähler, အီးပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဂျာမန်လူဦးရေတွင်အွန်လိုင်း-လိင်အသုံးပြုမှုပြဌာန်းခွင့်။ PLoS ONE 2017, 12, 1-12 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, RC; လက်သမား, BN; Spackman, M က .; မည်, DL Alexithymia, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် hypersexual အပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာအတွက်စိတ်ဖိစီးကျရောက်နေတဲ့မှအားနည်းချက်။ ဂျေလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2008, 34, 133-149 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Harry, MD, Paglia, HA; လာခြင်း, SA; Grant ကပထမ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှာ je အသက်: လက်တွေ့နှင့်သိမြင်မှုအသင်းအဖွဲ့များ။ အမ်း။ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုဟာ Off ။ ဂျေ Am ။ Acad ။ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2018, 30, 102-112 ။ [Google Scholar]
Gola, M က .; Lewczuk K ကို .; Skorko, အမ်ဘယျလိုကိစ်စမြား: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကို? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်အချက်များ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 815-824 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်, TE; Berridge, KC မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1993, 18, 247-291 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Berridge, KC; Kringelbach, အပျြောအပါး၏ ML ကိုထိခိုက် neuroscience: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုကြေး။ Psychopharmacology 2008, 199, 457-480 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Rettenberger, M က .; Klein, V ကို .; Briken, Hypersexual အပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်စရိုကျမြားအကြား P. အဆိုပါဆက်ဆံရေး။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2016, 45, 219-233 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Klein, V ကို .; Schmidt က, AF; Turner, D ကို .; Briken, P. အထီးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လိင် Drive နှင့် hypersexuality ရှိပါသလား PLoS ONE 2015, 10, 1-11 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
မန်း RE; Hanson, RK; Thornton, ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism များအတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအန္တရာယ်အချက်များ၏သဘောသဘာဝအပေါ်တချို့ကအဆိုပြုချက်။ လိင်။ ဂျေ Res အလွဲသုံးစားပြုမှု။ ဆက်ဆံပါ။ 2010, 22, 191-217 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kafka, အမတ်, အထီး၏ Hennen, ဂျေတစ်ဦးက DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ Comorbidity လေ့လာမှု (n Paraphilias နှင့် Paraphilia-Related Disorders အတူ = 120) ။ လိင်။ အလွဲသုံးစားမှု 2002, 14, 349-366 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Weiss, ဃအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်အထီးလိင်စွဲများတွင်စိတ်ကျရောဂါ၏ပျံ့နှံ့။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2004, 11, 57-69 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hagedorn, WB အသစ်တစ်ခု Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ရောဂါ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်များအတွက်ခေါ်ဆိုခ: စွဲခြင်းရောဂါ။ ဂျေစွဲ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Couns ။ 2009, 29, 110-127 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kaplan, က MS; Krueger, RB Diagnosis, အကဲဖြတ်ခြင်း, hypersexuality ၏ဆက်ဆံမှု။ ဂျေလိင် Res ။ 2010, 47, 181-198 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Maclean, JC; Xu, H ကို .; ပြင်သစ်, MT; Ettner, SL စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ: DSM-IV ဝင်ရိုးတန်း II ကိုမမှန်ထံမှအထောက်အထား။ ဂျေ Ment ။ ကနျြးမာရေးပေါ်လစီ Econ ။ 2013, 16, 187-208 ။ [Google Scholar] [PubMed]
ရိဒ်, RC; Davtian, M က .; Lenartowicz, တစ်ဦးက .; Torrevillas, RM, Fong သည်, TW ပတ်သ က်. hypersexual ယောက်ျားအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ရဲ့အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုအပေါ်။ Neuropsychiatry 2013, 3, 295-308 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hallberg, ဂျေ .; Kaldo, V ကို .; Arver, S ကို .; Dhejne, C ကို .; Öberg, KG hypersexual ရောဂါများအတွက်တစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူကုထုံးအုပ်စုတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2017, 14, 950-958 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]